Suuqa Reader Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Suuqa Reader Forex Tusiyaha
Suuqa Reader Forex Tusiyaha
Suuqa Reader Forex Tusiyaha waa ka kale ka duwan sababtoo ah waxaa la dhisay la fikirka kala duwan. akhristaha Market waa nidaam ganacsi Forex lagu kalsoon yahay oo awood leh. Waxa aad cusbooneysiisaa la guuro dhawaan ay ka dhacaya waqtiga kala duwan. akhristaha Market kuu ogolaanayaa inaad ogaato haddii suuqa waa kor ama hoos, overbought ama oversold, bilow fiican ama bearish bilowga. By macluumaadka ku xusan waxaad la, waxaad awoodi doontaa inaad ku ganacsan xaalad kasta noqon doonaa. Waxa shaqeyn doonaa wax ku ool ah in waqtiga sare sida H1 iyo H4. Waxaa laga yaabaa inay Macnuhu ganacsiga ee waqtiga yar sida M1, M5 iyo M15.
Iyadoo suuqa Reader tilmaame Forex waa Mudanayaasha ganacsi Forex lagu kalsoon yahay, aad u baahan tahay si taxadir leh iyadoo la isticmaalayo tan ma qabto wax tilmaamayaasha kale si loo xaqiijiyo dhismeedkan ganacsiga, aad kaliya u baahan tahay in ay ku xiran tahay macluumaadka yar oo la soo bandhigay suuqa kala tilmaanta hoose ee suuqa kala. Reader Market abuuraa signalka ku salaysan midabka ah ee qaab dhismeedka waqti la soo bandhigay suuqa kala tilmaanta.
Waxaa jira lix midabyo kala duwan waxaad ka arki kartaa on suuqa kala tilmaanta. Waxay yihiin – Dodger buluug, cas, yellowgreen, cagaaran, aqua, iyo casaan. Waxaa jira lix midabada leeyihiin macnaha kala duwan. Dodger buluuga ah kor u arrimuhu, midabka cas hoos muujinaya isbeddello, yellowgreen muujinaysaa overbought, midabka cagaaran muujinaysaa oversold, midabka aqua muujinaysaa fiican ku bilowday iyo midabka casaan muujinaysaa bearish bilowga.
Marka nidaamka suuqa Reader si sax ah ku raran on boosteejo ganacsi aad shaxda waa sidan u eg:
Waa in aad go'aansato waqtiga jir ganacsiga iyo arko waxa ka dhacaya geeska wakhtigaas la isticmaalayo nidaamka suuqa Reader. Ka soo qaad haddii aad rabto in la furo meel ah waqti saacaddii waa in aad aragto midabka ah ee H1 suuqa tilmaame akhristaha. Ku qor kaliya marka midabka ah ee H1 waa Dodger buluug ama aqua. Go'aanka aad gadaneyso waa in ay taageerayaan ku tilmaame Market Reader. Dodger buluug ama aqua ka dhigan tahay arrimuhu waa.
Gadashada Xaaladaha Isticmaalka System Market Reader.
Go'aanso oo waqtigaas aad u noqon doonaa ganacsiga.
Marka aad go'aansato in aad eegtid caddadka waqtiga oo laba laba ah taas oo muujinaysa calaamadaha fiican.
Direction suuqa waa in ay ahaataa ilaa in inta badan ee jir markii ugu.
Qaado faa'iido markii tilmaamayaasha ka beddeli midabka.
Iibinta Xaaladaha Isticmaalka System Market Reader.
Marka aad go'aansato in aad eegtid caddadka waqtiga oo laba laba ah taas oo muujinaysa calaamadaha bearish.
Direction suuqa waa in hoos in inta badan ee jir markii ugu.
Suuqa Reader Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Suuqa Reader Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Market Reader Forex Indicator.mq4?
Copy Market Reader Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Suuqa Reader Forex Indicator.mq4
Suuqa Tusiyaha Reader Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Market Reader Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousBBsqueeze Dark Forex Tusiyaha
Next articleJJN-Bee Forex Tusiyaha